जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुसम्बद्ध विचार प्रणालीमा संगठित ग¥यो, मरते दमतक लड्यो । नेताको करिश्मामा होइन, सामाजिक विकासको वास्तविकता सुहाउँदो नीतिको जीवनभर वकालत ग¥यो । यसैका निम्ति जसले भनिरहन्थ्यो ‘नेता होइन नीति प्रधान ।’ कुरो प्रस्ट थियो, संगठन बाबुसाहेबको अघिपछि हिँड्ने लावालस्कर होइन । त्यो तुष्टीकरणले बन्ने पनि होइन, त्यो त सामाजिक मिसनप्रतिको निष्ठाले बन्ने हो । त्यसो भए मात्रै त्यो दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । उसको काल्पनिकी बेजोड थियो । ऊ दूर क्षितिज नियाल्थ्यो । ऊ आफ्नो क्यानभासमा भएभरका सामाजिक रङ पोतेर सुन्दर चित्र प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यो, जहाँ दुर्बलहरू शिर ठाडो पारून्, सबै रङहरू हासुन र संगतिमा हातेमालो गरून् । ऊ समाजलाई कसैको रैती मान्दैनथ्यो, न त समाजलाई कागती निचोरेझैं निचोरेर खडा गरेको वैभवलाई न्यायिक करार गथ्र्याे ।
ऊ भन्थ्यो, ‘हाम्रो घरको भद्रगोल हामीले मिलाउने हो, त्यो क्षमता हामी राख्छौं पनि । तिमी आफ्नै घर हेर । हामीलाई तिमी साथी भए पुग्छ, बाबुसाहेब पल्टिनुपर्दैन ।’ स्वाभिमानको मूल्य उसलाई थाहा थियो । मित्रताको हैसियत पनि राख्दथ्यो ।
भोग र विलासमा उसको रुचि छँदै थिएन । ऊ अभावको पाशविकतालाई बुझ्दथ्यो र सामाजिक तहमा त्यसको उन्मूलनका निम्ति मरिहत्ते गरेर लागेको थियो । आफैंलाई भने त्यसले कुनै दाल गलाउन सकेन । जसले चना खाएर भोक टा¥यो तर आफ्नो विश्वास डगमगाउन दिएन । सायद ऊ आफ्नो दाइको सहादतलाई स्मरण गर्दै भन्थ्यो, ‘दाइ ! यति जाबो दुःखले मेरो रौं पनि झर्दैन, धन्दा न मान्नोस् । तपार्इंको सहादत खेर जान दिनेछैनौं ।’
उसलाई प्रतिपक्षसमेत पनि बडो आदर भावले हेर्दथे, उसको निष्ठा र समर्पण देखेर पानी पानी हुन्थे । हकिकत ! आफ्नै शिष्यले भने उसलाई अभरमा घचेटे । उबेला शक्तिको रंगशालामा अर्कै खेल थियो । टप्पर–टुइयाँ र उपबुज्रुग भन्थे ऊ प्राज्ञै छैन, कायर र कपटीहरू लाञ्छित गर्थे उसको गन्तव्य बत्तीमा होमिने पुतली हो । तिनैले यस्तो पनि भन्न भ्याए । ऊ विधर्मी हो, विधर्मीको पुच्छर हो । यो पनि त हकिकत हो ! – इतिहासको न्यायको इजलासमा अर्कै इन्साफ हुनु थियो, ऊ अद्वितीय जागृत थियो, एक कुशल रणनीतिज्ञ थियो । ऊ आफैं जलेर गयो, तर उसले प्रदीप्त गरेको मार्गमा अन्ततः उनका आलोचक र विपक्षीसहित सिंगो मुलुक होमियो पनि । ऊ थियो अटल नक्षत्र । यस्तो थियो ऊ जमानाको नायक ।